यदि तपाईको शरीरमा पानीको कमी भएमा यस्ता लक्षण देखिन्छन् , जान्नुहोस् ! - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it गर्दनको कालोपनलाई गोरो बनाउने सजिलो घरेलु विधि ! जानकारी लिनुहोस् !
Up Next दुब्लो भएर हैरान हुनुभएको छ ? यस्ता कारणले गर्दा तपाई मोटाउँन सक्नुभएको छैन
आत्तिनुहुन्छ ? एन्जाइटी हुन सक्छ
मानिसलाई खतराको सम्भावना भएमा शरीरले कुनै न कुनै प्रतिक्रिया देखाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा मन आत्तिने, डर लाग्ने असामान्य विषय होइन…
वास्तुशास्त्र आनुसार कुन दिशामा के राख्ने ?
किन वास्तुशास्त्र ? आफुलाई आधुनिक युगको पुस्ता ठान्ने हामीलाई वास्तुशास्त्र वाहियत जस्तो लाग्छ । यसलाई कतिले आडम्बर र अन्धविश्वास पनि…